विचार – Halkaro
-दीपशिखा शर्मा जीवन गतिशील छ । संघर्ष यात्रामा अनेक आरोह अवरोहहरू आउँछन् । तर धैर्य र साहसकासाथ परिस्थितिको मुकाविला गरी निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नु नै महानता हो । जो मान्छे उद्देश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर संघर्ष गर्दछ । त्यो मात्र निश्चित गन्तव्यमा पुग्न सफल हुन्छ । सङ्घर्षको दौरानमा आएका हण्डर,ठक्करबाट कत्तिपनि विचलित नभई अगाडी बढ्न सक्नु […]
सर्वसाधारण त्यी गरिब जनता दिन दिनै मरेका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैँ ! आखिर जुन सरकार आए पनि हुने केही हैन। काम गर्न नदिने, एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाबि हुँदा देशमा विकासको मोड हैन बिकटता निम्तिएको छ । आखिर लोकतन्त्र, गणतन्त, समाजवाद जे भने पनि, जे अाए पनि गरिब निमुखा जनताहरूले […]
पार्टी एकीकरण की राजनीतिक ध्रुबिकरण
२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यो युग नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएझैं “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण” गर्ने युग हो । अर्थात् त्यो समृद्धीकरणको चरणमा टेकेर समाजवादतर्फ संक्रमण गर्ने ऐतिहासिक युग हो । यही नयाँ ऐतिहासिक […]
भारतीय विस्तारवादको स्वार्थअनुसार संविधान बनाउन दबाब दिँदै भुइँचालोले थिलथिलिएका नेपाली जनतालाई भोकभोकै मार्न भारतीय विस्तारवादले २ वर्षअघि लगाएको नाकाबन्दीलाई चटक्कै बिर्सेर खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले भारतमै हिन्दुवता फासिवादी सरकारको नामले बदनाम र घृणाको पात्र बनेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको कार्यक्रमलाई जुन शैली र स्वरूपमा तर्जुमा गरेको छ, यसप्रति चौतर्फीरूपमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै […]
तपार्इँ हामी ज्यूँदै हुँदा समृद्ध नेपाल देख्छौँ
प्रकाशित मिति : २०७५, १ बैशाख शनिबार April 14, 2018
हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै महत्वपूर्ण मोडबाट अगाडि बढ्दै छौँ । २ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा साँच्चै संविधानसभाबाट संविधान बन्ला त ? संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संधिवान बन्ला कि नबन्ला भन्ने बडो चिन्ता थियो । किनकि पहिलो संविधानसभा असफल भइसकेपछि दोश्रो संविधानसभा पनि त्यसरी नै असफल भयो भने यो देशको भाग्य के हुने हो ? यो देशका […]
भारत भ्रमणमा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीलार्इ बाबुरामको यस्तो सुझाव
काठमाडौँ । शुक्रबार भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीलार्इ पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले १० बुँदे सुझाब दिएका छन् । हिजो प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलार्इ छलफलका लागि बोलाएका थिए। सो छलफलमा भट्टरार्इ भने सहभागि भएका थिएनन्। यी हुन भट्टरार्इले अोलीलार्इ दिएका सुझाब १) (क) नेपालको संविधान जारी भई तीन तहको चुनाव सकेर नयाँ सरकार […]
प्राचीन सभ्यताको धनी टापू बालीमा उभिएर घोत्लिँदा…..
प्रकाशित मिति : २०७४, २३ फाल्गुन बुधबार March 12, 2018
आज मातृभूमि नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हिन्द र प्रशान्त महासागरको सीमामा अवस्थित प्राचीन सभ्यताको धनी टापू बालीमा उभिएर घोत्लिदा प्राप्त गरेका अनुभूतिहरू सबैसंग बाँड्ने अनुमति चाहन्छु। एउटा मध्ययुगीन गाउँको गोठालोबाट देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेको मान्छे ६४ बर्षको उमेरमा सबैथोक त्यागेर किन भौंतारिएको होला? के ऊ बौलाएकै हो? कि ऊ अमुक शक्तिको गोटी […]
सिरियामा मानवीय संकट दिनानुदिन बढ्दो छ । हालै सिरियाको पूर्वी गौटा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी चार सयभन्दा बढी सिरियाली नागरिकको ज्यान गयो । ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश अबोध बालबालिका छन् । बसर अल असद सिरियाली सत्तामा आएको सात वर्ष भयो । उनको आगमनसँगै सिरिया कहालिलाग्दो गृहयुद्धमा होमिएको छ । अहिलेसम्म पाँच लाखभन्दा बढी सिरियाली नागरिकले ज्यान […]